Job vacancies | Majesty Family International Co Ltd ﻿
Shin Saw Pu, Sanchaung, Yangon
•	Receive shipments and ensure both quality and quantity •	Trace, track and expedite purchase processes •	Ensure accuracy of all inventories •	Maintain communication with warehouse staff to ensure proper working order •	Review bills, invoices and purchase orders •	Ensure all payments are processed in time •	Assist customers with inquiries •	Organize files both manually and electronically •	Create packing lists and update shipment information in database •	Monitor and facilitate repair orders •	Coordinate deliver ...
•	Cosmetics စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည် •	နေ့စဉ် အရောင်းစာရင်းများ ၊ ကောင်တာသို့ဝင်ရောက်လာသော ပစ္စည်းစာရင်းများအား Customer များ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် ၀န်ဆောင်မှုပေးရမည် •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည ...
•	Social Media နှင့် ပတ်သက်သော Design များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Team Work ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။ •	Dead Line အမှီ ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	အလှအပရေးရာနှင့်ပတ်သက်သော Design များအား စိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။ •	Creative Idea ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	နေ့စဉ် မိမိဂိုထောင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ •	ဆိုင်များအတွက် Itemများကို ကူညီပြီး ထုတ်ပေးရသည် •	Store မှထုတ်သော Itemများကိုလည်း စာအုပ်တွင် မှတ်ပေးရ� ...
•	To -Counter Ground Check •	Daily data entry for Sale Transactions •	To check the gap between list •	Sale Report and the monthly Customer List Report to Manager •	Sale & Marketing Team of requirements contribute Participant
•	နေ့စဉ် Customer များထံဖုန်းဆက်၍ Order ကောက်ရန် •	Weekly Sale Report များကို Sale Admin သို့ ပေးရန် •	နေ့စဉ် Customer List Update ပြုလုပ်ရန် •	ပစ္စည်းများပေးပို့ပြီးထားကြောင်း Customer များထံဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရန် •	BA များထံ နေ့စဉ်ဖုန်းဆက်၍ Attenda ...
•	Improve online content in both English & Burmese •	Able to handle politely the Facebook page comments reply and monitor the customer’s feedback. •	Maintaining social media page •	Writing emails, generating complaints as and when required
•	နေ့စဉ် မိမိဂိုထောင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ •	ဆိုင်များအတွက် Itemများကို ကူညီပြီး ထုတ်ပေးရသည်။ •	Store မှထုတ်သော Itemများကိုလည်း စာအုပ်တွင် မှတ်ပေး� ...
•	Process and disburse cash payment for advances, utilities bills, etc. •	Responsibility of maintaining petty cash inagood way and in accordance with financial procedures •	Preparing petty cash report •	Process cash received from internal & external customers and record / deposit to bank correctly and timely •	Prepare the daily cash income report •	Providing the completeness of payment/receipts documents to ensure the document meets the requirement of finance procedure •	Maintaining monthly, weekly and daily report o ...
•	Manage and improve online content in both English & Burmese •	Able to handle politely the Facebook page comments reply and monitor the customer’s feedback. •	Maintaining social media page •	Writing emails, generating complaints as and when required
•	To smooth day-to-day administrative & HR activities . •	Support the requirement of Department Head •	Assist & Handle in other administration office work •	Maintain office documents & Stationary •	Handling for Government all process •	Maintain administration files and records •	Maintain employee personal profile and records
•	တာဝန်ယူထားသော ဆိုင်များအရောင်းတက်ရန် Demo ပွဲနှင့် Special Promotion,Display,Stock,Tester,New Product များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် •	လစဉ် Promotion/FOC များအား ဆိုင်များသို့(၃)ရက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားစာပို့ရန် •	Customer Order မျာ� ...
•	လစဉ်မိမိတာဝန်ယူထားသော Counter များသို့ Ground Check ရန် •	မိမိတာဝန်ယူထားသော ကောင်တာများ၏ Sale Transaction များကို နေ့စဉ်သွင်းရန် •	Merchandising ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းရန် •	Demo ပွဲများအတွက် လိုအပ်သည်များ စီစဉ်ပေးရန် •	Customer List Update သွင်� ...